वन्यजन्तुमा ७० प्रतिशत भा’इरस देखिएपछि अब देखि मा’सु खान प्र’तिबन्ध लगाउन आग्रह ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/वन्यजन्तुमा ७० प्रतिशत भा’इरस देखिएपछि अब देखि मा’सु खान प्र’तिबन्ध लगाउन आग्रह !
एजेन्सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले वन्यजन्तुको मा’सु नखान र खान प्र’तिबन्ध लगाउन अपिल गरेको छ ।७० प्रतिशत नयाँ ‘भा’इरस व’न्यजन्तुको मा’सुबाटै आएको भन्दै डब्लुएचओले जनावरको मा’सु नखान र व्यापारमा प्र’तिबन्ध लगाउन अपिल गरेको हो ।डब्लुएचओ प्रमुख डा. टेड्रोसले वन्यजन्तु व्यापारमा रो’क लगाउन विश्वका सबै देशलाई आ’ग्रह गरेका छन् । बन्यजन्तुको मा’सु लाखौं मानिसको लागि भोजनको महत्वपूर्ण स्रोत भएपनि अधिकांश बजारमा स्वच्छताको क’मी रहेको डब्लुएचओको भनाइ छ ।
भोजन र स्वच्छताका सबैले क’डाइका साथ पा’लना नगर्दासम्म बन्यजन्तुको मा’सु प्रयोग रो’किनुपर्ने गे’यब्रेससको भनाइ छ । को’रोना भा’इरसको म’हामारी चीनको वुहानमा पनि जनवारकै मा’सुवाट फै’लिएको अ’नुमान गरिएको छ । यद्यपि यसकाे स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेकाे छैन । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले को’रोना भा’इरसको विश्वव्यापी म’हामारीको अबको केन्द्र अफ्रिका बन्न सक्ने भन्दै चे’तावनी दिएको छ । भा’इरसको म’हामारीबाट अफ्रिकामा कम्तिमा तीन लाख मानिसको मृ’त्यु हुनसक्ने डब्लुएचओको चे’तावनी छ ।
सं’क्रमण फैलिएमा तीन करोड मानिस गरिबीको रे’खामुनि ध’केलिने चे’तावनी पनि राष्ट्रसंघले दिएको छ । राष्ट्रसंघले सम्भावित म’हामारी नियन्त्रणमा लिनका लागि एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट समेत मा’ग गरेको छ ।एक हप्तादेखि अफ्रिकामा को’रोना सं’क्रमण बढेको छ । स्वास्थ्य सुबिधा र पूर्वाधार कम भएकाले सं’क्रमण फै’लिएका धेरै मानिसको मृ’त्यु हुने आं’कलन गरिएको छ ।भा’इरसका कारण एक हजार भन्दा बढीको मृ’त्यु भएको छ भने करिव २० हजार संक्रमित छन् । अहिलेसम्म सं’क्रमण अल्जेरिया, इजिप्ट र मोरक्कोमा बढि देखिएको छ ।
जेठ ०४ गते आईतबार हलेशी महादेवको दर्शन गर्दै पढ्नुहोस राशिफल।